Dilka Jamaal Khaashuqji: Isbadallo ma u horseedi karaa siyaasadda Bariga Dhexe? - BBC News Somali
Dilka Jamaal Khaashuqji: Isbadallo ma u horseedi karaa siyaasadda Bariga Dhexe?
Dilka Jamaal Kaashogji oo dibadbaxyo looga soo horjeedo Sucuudiga ka dhaliyay caalamka
Dilka weriye Jamaal Khaashogji wuxuu cakiray xiriirka diblumaasiyadeed ee u dhexeeyay Sucuudiga iyo Turkiga. D0hacdadan,waxay madax xannuun ku reebtay dhammaan dalalka reer galbeedka ee siyaasaadda iyo arrimaha gancsiga kala dhexeeyo Sucuudiga, waxayna soo bandhigtay dabeecadaha dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan oo doonaya in sannooyin soo socda uu xukumo boqortooyada Sucuudiga.
Arrinta dilka weriyaha weli waxay ka dhex aloosantahay gudaha Mareykanka, maamulka Trump waxay u muuqata inuu ku rajo wayn yahay in laiska ilaawo sheekada ku aadan dilka Jamaal Kaashogji, waxaa jiraa baaqyo caalami ah oo ay siyaasiyiin sar sare kasoo afuufayaan magaalada Capitol Hill kuwaaso ay ku biireen khuburro Sucuudiga u dhashay oo soo jeedinaya in qiimayn hor lagu sameeyo xiriirka Sucuudiga iyo Mareykanka.
Iyadoo ay socdaan baaritaanada lagu baadigoobayo maydka Khaashogji, haddana, su'aasha lais weeydinayo ayaa ah yaa dilay? Inkastoo laga yaabo in aanan la ogaanin arrintaasi.
Caddeymaha ilaa hadda la hayo waxay muujinayaan in dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan uu wax ka ogaa dilka weriyaha.
Maxamed Bin Salmaan wuxuu sheegay in uusan wax ka ogayn dilka Weriye Jamaal Kaashogji
Isbaddallada uu wado dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan waxay horseedeen tallaabooyin dhibaato leh, wuxuu mas'uul ka ahaa in Sucuudiga uu go'doomiyo Qatar , afduubkii ku meel gaarka ah ee lagu sameeyay ra'iisul wasaarihii Lubnaan iyo dagaalka Sucuudiga uu ka wado Yemen.
Gabadhii u doonayd Jamaal Kaashogji oo ku gacan seertay casuumaad uu u fidiyay Trump
Trump wuxuu doonaya saddex arrimood, inuu ka caawiyo dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada gobolka, wadahallada Falastiiniyiinta iyo Israa'iil iyo in Sucuudiga ka qayb qaato dadaallada maamulka Trump ee ku aadan xoojinta cunaqabataynta dhaqaale ee saran Iiraan.
Ceelasha shidaalka Sucuudiga
Saaxibada Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan hubka ay ka iibiyaan Sucuudiga, hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel waxay hakisay hubkii ay ka iibin jirtay Sucuudiga si loo eego dambiyada dagaal ee laga gaystay Yemen. Dalka Faransiiska ayaa ku raacay Jarmalka tallaabadaasi.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaannimada maku waayi karaa xilka loo magacaabay?
Waa kuma la taliyaha Amniga Qaranka Xasan Sheekh ee beddelay Fahad Yaasiin?
'Ninkii Gaalkacyo labadiisa wiil ku dilay isagoo hurda ayaan u tagnay'
Xog ku saabsan Vladimir Putin oo isku day dil ka badbaaday